Kuo wuxuu hubiyaa in Apple Watch Series 8 uu lahaan doono heerkulbeegga jirka | Waxaan ka imid mac
Kuo wuxuu leeyahay Apple Watch Series 8 wuxuu lahaan doonaa heerkulbeegga jirka
Falanqeeyaha caanka ah ee deegaanka Apple Ming-Chi Kuo ayaa u diray war-saxaafadeed halkaas oo uu ku xaqiijinayo in sannadka dambe Apple Watch (ma aha midka aan arki doonno toddobaadka soo socda) ay awoodi doonaan inay cabbiraan heerkulka jidhka ee isticmaalahaaga
Waan soo daahnay Waan ogahay in halkaan ay aad u fududahay in la yiraahdo, laakiin runtu waxay tahay inay noqon lahayd guul in taxanaha hadda jira 6 uu ku daro, anigoo og in xummaddu ay calaamad u tahay faafitaanka suurtagalka ah ee COVID-19. Laakiin hey, si ka fiican sidii hore
Bilowga masiibada waxaan iibsaday a heerkulbeeg dijitaal ah nooca bastooladda aad foodda ka tooganayso sidii adigoo fulinaya koox daroogo ah. Waxa ugu horreeya ee aan ku fikiray markii aan markii ugu horreysay adeegsanayey oo aan arkay sida ay u shaqaysay (si fudud u iftiiminta maqaarka) ayaa ah in Apple ay hubaal ka shaqeyneysay yareynta nidaamkaas si loogu daro Apple Watch.
Hadda, falanqeeyaha Kuuriya Kuo, wuxuu xaqiijinayaa in Apple Watch Taxanaha 8 waxay hore u qaadan doontaa heerkulka jidhka isticmaalaha. Waa wax laga xishoodo inaan weli sugno sannad si aan u aragno. In kasta oo ay shaki la'aan noqon doonto horumar aad u weyn in Apple Watch -kaagu kuu digo isla marka aad bilowdo qandho.
Kuo kama uusan hadlin wararka xanta ah ee ah in jiilka xiga Apple Watch ay cabiri doonaan cabirka heerka sonkorta dhiigga, ama dhiig karka. Taasi waa qarsoodi. Wuxuu kaliya tilmaamay in soo -saaraha Shiinaha ee qaybaha iyo dareemayaasha dhijitaalka ah Luxshare Precision uu noqon doono alaab -qeybiyeyaasha dareemayaasha biometric -ka cusub ee ku dara taxanaha xiga ee Apple Watch.
Waan arki doonaa haddii cusub silsiladda 7 kaas oo la soo bandhigi doono Talaadada soo socota, wuxuu ku darayaa dareere xog caafimaad oo cusub, sida taxanaha 6 oo kale leh dareeraha heerka ogsajiinta dhiigga. Wararka xanta ahi waxay soo jeedinayaan inaysan taasi ahaan doonin, oo warka Apple Watch ee soo socda wuxuu diiradda saarayaa naqshadda dibedda oo leh cabbirro cusub iyo xargo, iyo wax yar oo kale. Waan arki doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Kuo wuxuu leeyahay Apple Watch Series 8 wuxuu lahaan doonaa heerkulbeegga jirka
Eeg Xilliga XNUMX Premiere wuxuu ka dhigayaa Taxanaha Riwaayadaha ee aadka looga daawado Apple TV +
Kevin Lynch wuxuu noqdaa madaxa horumarinta Apple Car